China 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Heat yakanyoroveswa girazi fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Kupisa Kwakanyorova Girazi
Kupisa kudziya inzira inoparadza umo girazi regirazi rakabatiswa rinoiswa panopisa kwema 280 ° kwemaawa akati wandei pamusoro peimwe tembiricha gradient, yekukonzera kutsemuka.
Kudziya kwakanyorova girazi, Kupisa kuchinyorova
Yese inoyerera girazi ine imwe nhanho yekusakwana. Imwe mhando yekusakwana ndeye nickel sulfide kuiswa. Mazhinji inclusions akatsiga uye haakonzeri matambudziko. Iko kune, zvisinei, iyo mukana weiyo inclusions iyo inogona kukonzeresa kupaza kwega kwega mugirazi rakadzikama pasina chero mutoro kana kupisa kwemhepo kuri kuiswa.
Kupisa kudziya inzira inogona kuburitsa pachena inclusions mugirazi rakadzikama. Maitiro acho anosanganisira kuisa girazi rakadzikama mukati mekamuri uye kusimudzira tembiricha kusvika ingangoita 280ºC yekumhanyisa nickel sulfide kuwedzera. Izvi zvinokonzeresa girazi rine nickel sulfide inclusions kupaza mukamuri inodziya, nekudaro ichideredza njodzi yekuparara kwemunda.
1: Chii chinopisa chakanyorova girazi?
Kupisa soak bvunzo ndeyekuti girazi rakapiswa rinopiswa kusvika ku280 ℃ kuwedzera kana kubvisa 10 ℃, uye wakabata imwe nguva, ichikurudzira kristaro chikamu shanduko yenickel sulfide mugirazi inopedzwa nekukasira, kuitira kuti girazi raputika riitike rakaputsika pakutanga kupisa kwakanyorovera bvunzo vira, zvichidaro kudzora post-kumisikidza girazi rakaputika.
2: Ndeapi maficha?
Kupisa Zvakanyoroveswa girazi hariputsiki zvoga uye rakachengeteka zvakanyanya.
Iyo yakapetwa ka4-5 zvakapetwa kupfuura girazi rakajairwa rakavharwa.
Kuvimbika kwekupisa soak bvunzo kusvika kumusoro se98.5%.
Inotyoka kuita zvidimbu zvidiki, zvisingakuvadzi zvisina mitsetse kana makona akapinza.
3: Sei kupisa kuchinyorova?
Chinangwa chekudziya kupisa ndechekudzora kuitika kweToughened Safety Glass ichipaza kamwe chete mushure mekumisikidzwa, nekudaro kudzora inowirirana yekutsiva, yekugadzirisa uye yekukanganisa mitengo uye njodzi yechivako ichiiswa seisina kuchengetedzeka.
Kupisa Kwakanyoroveswa Kudzivirirwa Kudzivirira Girazi kunodhura kupfuura zvakajairika Kubata Girazi, nekuda kwekuwedzera kugadzirisa.
Asi tichienzanisa nedzimwe nzira kana iyo chaiyo mutengo wekutsiva yakaputswa Toughened Kudzivirira Girazi mumunda, pane chikonzero chakakura chemutengo weiyo yekuwedzera maitiro.
4: Panofanira kudziirwa papi
Aya anotevera mafomu anofanirwa kutariswa nekukwidza kupisa:
Infill Balustrades - kana kudonha iri nyaya.
Yakapeteredzwa Kumusoro Glazing.
Spandrels - kana zvisiri kupisa kwakasimbiswa.
Structural Glazing pamwe Spider kana zvimwe fittings.
Zvekutengesa Kunze Frameless Girazi Masuo.
5: Tinoziva sei kuti girazi iri kupisa kwakanyoroveswa?
Izvo hazvigoneke kuziva kuti girazi iri Heat Soaked kana kuti kwete nekuona kana kubata. Kunyange hazvo, Timetech Girazi rinopa mushumo wakadzama (kusanganisira graphical inomiririra) yega yega yega Yega Huturu Yakanyoroveswa ratidziro kuratidza kuti girazi iri Rinopiswa Zvakanyoroveswa.
6: Pane chero ukobvu hwegirazi hunogona kunge hwakanyoroveswa here?
4mm kusvika 19mm ukobvu inogona kupisa soaed
Pashure: Sirivheri girazi, Mhangura yemahara Mirror
Zvadaro: 5mm 6mm 8mm 10mm yakanyorovera girazi inotsvedza musuwo
10mm Heat Yakanyorova Girazi
12mm Kupisa Kwakanyorova Girazi
4mm Pisa Yakanyorova Girazi
5mm Kupisa Kwakanyorova Girazi
6mm Kupisa Kwakanyorova Girazi
8mm Kupisa Kwakanyorova Girazi
Kupisa Kwakanyoroveswa Kudzivirira Girazi
Yakapisa Hasha Yakanyorova Girazi